GBAA M AKWỤKWỌ MA Ọ BỤ WEPỤTA IHE NDETE M-ỌNYỊUKE, NWA ỤBỤRỤ NA-ANỤ ỌKỤ NA-AGWA JAMB – hoo!haa!!
Abụja: Akachukwu Ọnyịuke, nwa Anambara Steeti ụbụrụ na-anụ ọkụ, onye detere A itoolu n’ule akwụkwọ WAEC nke ọnwa Mee/Juun afọ 2019 e cheerela aka mgba nye Odeakwụkwọ Ukwu ụlọ ọrụ JAMB, Ọkammụta Ishaq Oloyede ka ọ gbaa ya akwụkwọ ma ọ bụkwanụ o wepụta ihe ndete ya n’ule JAMB nke afọ a.
Ọnyịuke, onye Nimo dị n’Okpuru Ọchịchị Njikoka n’Anambara Steeti gwara ndị nta akụkọ na ihe JAMB jiri jichie ihe ndete (result) ya na ya bụ ule bụ na ọ ga-abụ na ya nwere karịa akara narị atọ n’iri asaa (370)
Nwatakịrị a bụrụ na – anụ ọkụ gwara Odeakwụkwọ Ukwu JAMB ka o lelee onyonyoo CCTV nke ogige Ule ya iji hụ na ya emeghị ntapu Ule ọbụla dịka ịbata n’ogige Ule ahụ n’ụzọ n’ezihi ezi.
“Odeakwụkwọ Ukwu, Ọkammụta Oloyede na-asị na m banyere n’ụlọ Ule akwụkwọ ahụ n’ụzọ n’ezihi ezi. Ọ bụrụ na o nwere ihe akaebe o ji n’aka iji gosi nkea, ya nye iwu ka a kpụrụ m.
“Egwu anaghị atụ m maka na a gbasoro eji edebanye aha tupu abanye ule.
Ihe ndete ule Ọnyịuke ka JAMB jichikọrọ kemgbe ọnwa Mee, n’agbanyeghị mbọ nile ya onwe ya tinyekwara ụlọ akwụkwọ ya na nne na nna ya gbaworo banyere nkea.
Onye Nlekọta ụlọ ọrụ JAMB n’Anambara Steeti bụ Linda Ajanwachukwu kọwara na Ọnyịuke emeghị ndebanye aha ọ kwesịrị ime tupu ịbanye maka ule ahụ.
Mana Ọnyịuke kọwara na nkea abụghị eziokwu
“Ikwu na ọ bụ mmadụ deere m Ule ahụ na-atọ ọchị maka na o nweghị onye ọzọ na Naịjiriya ga-ede ule akwụkwọ ahụ etu m siri dee ya.
“Nke abụọ, e tinyere aka na mpe mpe akwụkwọ ịbanye ule(slip) iji gosi na m gbasoro usoro kwesịrị ekwesị maka ịbanye soro lee Ule ahụ, JAMB kwesịrị iwepụta mpe mpe akwụkwọ m ahụ.
“Nke atọ, ogige ule akwụkwọ anyị na Chamscity/Sascon CBTS2, Third Floor, n’ụlọ akwụkwọ Sascon International School, Maitama, Abuja, bụ ebe enweghị ntapu ule ọbụla, e nwekwuru onyonyoo CCTV n’ogige ule akwụkwọ ahụ. Ha lelee ya, mata nke bụ eziokwu”
Bikonu, kedu ihe mmadụ ji isi koro? Onye detere ihe n’ule akwụkwọ karịa ibe ya n’ emeghị ntapu ule, a kwugharịwa ya. Gịnị gbochiri ndị JAMB ịkpọ nwatakịrị a ka ọ nọrọ n’ihu ha degharịa ule ahụ?
Previous Post: 2023:NAMADI SAMBO NA NDỊ APC NA-AKPAZI
Next Post: BỊAFRA:DSS AKPỤRỤLA ODEÈ BỊAFRA MAKA IYI UWE E DERE ‘ANYỊ NILE BỤ NDỊ BỊAFRA’